Maxaad ka xasuusataa Aroornimadii 30-05-2006 Ee Radio Hargeysa laga baahiyey sababta xilka looga qaaday Ismaaciil Aadan | Marsa News
Maxaad ka xasuusataa Aroornimadii 30-05-2006 Ee Radio Hargeysa laga baahiyey sababta xilka looga qaaday Ismaaciil Aadan
August 6, 2017 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Waxay ahayd dhacdo ugub ku ahayd dalkan Jamhuuriyadda Somaliland ficilkii uu ku kacay ee lagu eryey, oo ahayd inuu Lunsiaday mushaharkii qaybo ka mid ah Ciidamada Booliska JSL. Halkan hoose ka akhriso qayb ka mid ah fadeexadihii Ismaaciil Aadan Cismaan uu ku kacay ee Madaxweyne Daahir Rayaale ku abaal mariyey inuu eryo.
Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin dheg jalaq uma siin jirin, wuxuu Ismaaciil u arkayey geesi xukuumaddu leedahay oo aan la gaban weerarka mucaaradka. Marar badan oo ay xilligaas soo baxeen warar sheegaya in mugdi ka dhex jiro Madaxweyne Rayaale iyo Ismaaciil yare, haddana ma noqon kuwo xaqiiqo ah.
Waxase mar keliya lagu war helay mugdi galay kalsoonidii Madaxweyne Rayaale ka qabay Md. Ismaaciil Aadan Cismaan. Markaas oo Madaxweyne Rayaale soo saaray warsaxaafadeed uu kaga jawaabayo hadal ka soo yeedhay Ismaaciil Aadan Cismaan oo uu ku weeraray qaar ka mid ah culimada Burco oo uu ku sifeeyay inay yihiin wadaado Diin cusub la soo baxay. War Murtiyeedkii Madaxweyne Daahir Rayaale waxaa ka mid ahaa sidan “Maaha go’aan xukuumadeed odhaahda wasiirka arrimaha gudaha Md. Ismaaciil Aadan Cismaan ee uu ku leeyahay waxaanu la dagaalamaynaa wadaado gaara sida ku qornayd wargeyska jamhuuriya”. Xukuumadu culimo iyo koox gaara oo ay talaabo ka qaadaysaa ma jirto sida caadiga ahna shakhsigii fal-danbiyeed ku kacan ayuunba la qaban karaa iyadoo sifo sharciya loo maraayo.”
Ismaaciil Aadan Cismaan, kama jawaabin warsaxaafadeedkaas Madaxtooyada, waxase aan meesha laga saarayn inuu warsaxaafadeedkaasi ahaa farriin miisaan leh oo dareen gelisay Ismaaciil Aadan Cismaan, taas oo uu Madaxweynuhu ugu muujinayay isbedel ku yimid xidhiidhkoodii wacnaa, maadaama Madaxweyne Rayaale ka door biday inuu Ismaaciil gaar ula hadlo, inuu ugu jawaabo warsaxaafadeed dunida lagu baahiyay.
Muddo kooban ka dib markii dareenkaasi soo if baxay, ayaa goor arooryo ah oo ku beegnayd 30 May, 2006 Idaacadda Radio Hargeysa laga maqlay warsaxaafadeed Madaxtooyada ka soo baxay oo xilkii lagaga qaaday Ismaaciil Aadan Cismaan. “’Madaxweynaha JSL Md Daahir Rayaale Kaahin ayaa saaka laba xeer Madaxweyne oo uu soo saaray xilkii qaranka ay u hayeen kaga qaaday Wasiirkii Arrimaha Gudaha Ismaaciil Aadan Cismaan iyo Taliyihii guud ee ciidanka Booliska Somaliland guddi baadhiseedna u saaray falkii ay ku kaceen kooxda Birmadka oo aan ahayn dhaqan ciidan, si sharciga loo mariyo cidii masuulka ka ahayd dhacdadaasi.
Madaxweynuhu xil ka qaadista wasiirka Arrimaha Gudaha sababteeda waxa uu ka yidhi ”Khilaafkii adiga iyo taliyaha ciidanka Booliska idinka dhexeeyay oo aan in badan isku dayay inaan xaliyo ayaa wuxuu maanta ina gaadhsiiyay in koox ka mida ciidanka Birmadka Boolisku ay ku kacaan gadood ka dhashay khilaafka adiga iyo taliyaha idiin dhexeeya, sidaasi daraadeed waxa lagama maarmaan noqotay inaan kaa qaadi xilkii wasiirnimo ee aad qaranka u haysay laga bilaabo Maanta.”
Tallaabadaas Madaxweyne Rayaale shaqadii kaga fadhiisiyay Wasiirkiisii, waxa ay dad badan ku noqotay yaab iyo amakagaad, waayo marna lagama fakarin in Mudane Rayaale si fudud xilka uga qaadi karo Ismaaciil oo la saadaalin jiray inay mar xilka ka wada degi doonaan, marka loo eego xidhiidhkoodii xooganaa iyo kalsoonidii ka dhaxaysay.